Heverinao ve fa sarobidy be ny fikojakojana ny Flash? Hevero indray - NAB Show News amin'ny Broadcast Beat, fampielezam-peo ofisialin'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Content Creation » Heverinao ve fa sarobidy be ny fikojakojana ny Flash? Eritrereto indray
Heverinao ve fa sarobidy be ny fikojakojana ny Flash? Eritrereto indray
Jason Coari, tale manerantany, Marketing and Product Marketing atsangana hitondra
Manaiky ny tsirairay fa ny tselatra dia afaka manatanteraka ny fahombiazany. Ary ho an'ny dingana sasantsasany sy ny fizotran'ny asa, io karazana fampisehoana io dia tena ilaina tokoa. Ohatra, rehefa miara-miasa amin'ny rindran-tsarimihetsika 4K (na matetika, 8K), ny flash dia afaka manome ny karazana traikefa ilaina mba hamoronana ny votoatiny manan-danja indrindra.
Na dia izany aza, misy ny finoana goavana amin'ny indostrian'ny media sy ny fialamboly izay lafo loatra ny teknolojia flash. Rahoviana atsangana hitondra Mpampianatra lahatsary fanadihadiana - manomboka amin'ny tranokala famokarana, fikambanana iraisam-pirenena, orinasam-pamokarana, fianarana ary ny orinasa mpanolotra aterineto manerana an'i Amerika Avaratra, Eorôpa sy i Azia - mihoatra ny antsasak'ireo namaly no voalaza fa tsy fahampiana voalohany amin'ny fametrahana vahaolana mipaka.
Izany dia ampahany ampahany ihany, ary iray ihany izay mitantara fotsiny ny antsasak'io tantara io. Ny vidin'ny volavolan-tserimporam-pamokarana iray manontolo dia toa lafo kokoa raha ny fandinihan-draharaha no mandinika fotsiny ny vidin'ny vidin-javatra mifandraika amin'ny sandan'ny vola ($ / TB) ho an'ny solosaina HDD mifototra amin'ny SSD. Na izany aza, rehefa voamarika fa ny tombam-bidin'ny fananana (TCO) dia mitatitra, tsy lazaina intsony ny haavon'ny haitao, ny toekarena ny fitahirizana flash, ary indrindra ny fitahirizana flash (NVMe) tsy fahita firy.
Zavatra voalohany aloha - Inona ny NVMe?
Hatramin'ny fampidirana ny NVMe, ny tahirin-koditra mafy indrindra - toy ny solosaina matanjaka (SSD) - dia nampiasa teknolojia SATA na SAS mba hampifandraisana ny fitehirizana amin'ny sisa amin'ny rafitry ny solosaina. Saingy ny SATA sy ny SAS dia natao hanohana fiarakodia mafy (HDDs), ary raha namorona haingam-pandeha vaovao haingana kokoa ny mpamorona, dia voafetra ny fampiroboroboana SSD ireo teknolojia tranainy ireo.
NVMe dia natao manokana ho an'ny fitahirizana tselatra. Amin'ny NVMe, ny foibe CPU tsirairay dia mifandray mivantana amin'ny tahiry amin'ny fampiasana ny bus PCIe avo indrindra fa tsy ny SATA na SAS interface. Amin'ny fampiasana PCIe, ireo dian-flash mifototra amin'ny ambaratonga amin'ny fahatsiarovana fa tsy ny HDDs tradisionnelle. Ny NVMe dia manatanteraka ny ampahany ambony amin'ny ampahany amin'ny fanohanana baiko marobe isaky ny filaharana, ary koa ny lalan'ny fifandraisana, noho ny protocols SATA na SAS. Ny SATA sy SAS tsirairay dia manana filaharana tokana mpitarika, izay afaka manatanteraka ny baiko 32 sy 254. Mifanohitra amin'izany, ny NVMe dia afaka manohana manodidina ny filaharana 65,000 amin'ny baiko 65,000 isaky ny filaharana.
Raha oharina amin'ny SATA sy SAS, NVMe dia mamela ny fangatahana vakiana haingana kokoa. NVMe dia afaka mizara manodidina ny 1 miliara isan-tsegondra isan-tsegondra, raha ampitahaina amin'ny SATA amin'ny 50,000 sy SAS eo ho eo amin'ny 200,000 isan-tsegondra isan-tsegondra eo ho eo. Ary na dia miaraka amin'ireo rehetra mamaky aza, ny NVMe dia mihazakazaka amin'ny 20 mikroseconds, raha ampitahaina amin'ny microseconds 500 ho an'ny SATA sy SAS. Ho an'ireo
Mampiasa fitahirizana ho fanohanana mpanjifa marobe mitaky angon-drakitra mifanaraka amin'ny angona angona, SSDs dia mielanelana ny HDD.
NVMe dia afaka manolotra vokatra manokana amin'ny tambanjotra iray. Amin'ny fitsapana anatiny atsangana hitondra, Ny fitehirizana NVMe dia hita fa mihoatra ny fe-potoana 10 ny famakiana sy famoahana ny fahombiazan'ny mpanjifa miaraka amin'ny mpanjifa tokana raha ampitahaina amin'ny mpanjifa NFS sy SMB.
NVMe dia teknolojia mamirapiratra izay mamela ny mpampiasa tsy hamaha ny tena mety ho an'ny flash, fa ny hanaovana izany amin'ny fihenan'ny TCO. Ny tombony amin'ny didy marobe isaky ny filaharana, mamaky haingana kokoa, ny latency ambany sy ny fampakarana miavaka dia mampifandray ary manome fahafahana ny NVMe hanomezana tombony ho an'ny vidiny sy tombony.
Tamin'ny lasa, ny fampiasana flash ho an'ny tranokala vitsivitsy dia varo-mangatsiaka satria ny fikambanana dia nampifandray ny fifandraisana Fiber Channel. Ny tambajotra dia matetika ny fandaniana faharoa lehibe indrindra aorian'ny fampielezam-peo, ary ny tambajotra Fiber Channel dia mety avo telo heny amin'ny avo efatra heny noho ny Ethernet.
Miaraka amin'ny NVMe, ireo orinasa dia afaka mahatratra ny fampiasana Fiber Channel toy ny fampiasana teknolojia Ethernet sarotra kokoa. Ny teknolojia Ethernet dia mamela ny mpampiasa mamonjy vola tsy amin'ny fitaovana fotsiny ihany fa amin'ny fitantanana ihany koa, satria ny fitantanana Ethernet dia tsy mitaky ny fahaizana manokana amin'ny fitantanana Fiber Channel. Araky ny haben'ny fandaminana dia misy fotoana iray ahafahana mamonjy an'aliny an'arivony - na ny an'arivony tapitrisa - dolara amin'ny tambajotra amin'ny fampiasana Ethernet.
Ireo tahirim-bola irery ihany matetika no mampihena ny fampiasam-bola amin'ny fitehirizana NVMe.
Rehefa mandinika ny NVMe dia tsy voatery ho tsy misy na inona na inona
Raha mieritreritra ny NVMe ny olona, ​​dia matetika izy ireo no mihevitra azy io ho mainty sy fotsy - ny NVMe na na inona na inona. Saingy misy faritra maitso lehibe hodinihina. Ny môtô izay mitondra any amin'ny sehatra fiadian-kevitra avo lenta no tena azo atao. Ny fametrahana ny tahiry NVMe amin'ny rafitra fitantanana maoderina sy ny sehatra fitantanana angona dia afaka mametraka tontolo iainana misimisy kokoa miaraka amin'ny sehatra iraisam-pirenena iray. Ny fikambanana dia afaka mividy ny habetsaky ny fitehirizana NVMe ilaina ho an'ny asa manokana, ary manararaotra ireo safidy hafa tahirin-tsakafo - anisan'izany ny arsiva misy tahirin-tsarimihetsika, ny tranombokim-bozaka, ary ny fitahirizana rahona - ho an'ny asa izay tsy mitaky fahaizana mitovy. Ity fahafaha-mamorona tontolo manodidina ity dia ahafahan'ireo orinasa hampihenana ny fividianany ny tahiry fandefasana lafo vidy, raha mbola mankafy ny tombontsoa rehetra azony.
Aoka ianao ho mavitrika, aza manakorontana
Miaraka amin'ny 4K amin'izao fotoana izao ary ny 8K dia tonga haingana ho an'ny fenitra vaovao, ny fahitana kely sy ny planina androany dia haka tahiry lehibe amin'ny hoavy. Ny fotodrafitrasa fitehirizana Flash dia manome ny fahafahana manohana ny format 4K androany, ary koa ireo ho avy amin'ny
8K sy ny sisa. Ireo fikambanana izay mametraka teknolojia mifototra amin'ny tontolom-bolongana hanohanana ny tranokala fitahirizana dia tsara toerana hiasa miaraka amin'ny teknolojia NVMe manaraka sy manaraka. Ary rehefa mihamitombo ny fiainam-panatrehana ireo rafitra ireo, dia hihena ny vidin'ny fandaniana - ny fametrahana ny fampiasam-bola handroso bebe kokoa.
Ho an'ireo fikambanana izay voafetra na voafetra ny fampiasam-bola ny fametrahana sy ny fametrahana noho ny vidim-piainana avo lenta amin'ny fitahirizana tselatra, hametraka ireto fanontaniana manaraka ireto aho:
· Nodinihan'ny fandinihina fandaniana ny fandoavam-bola momba ny toeram-ponenana, ny vola natokana, ny fandaniana fandosirana, ary ny fandaniana amin'ny tambajotra raha ampitahaina amin'ny rafitra HDD?
• Inona no vidin'ny karama ho an'ny mpanjifa, fa tsy ny fahaiza-manao?
Ny famakafakana ireo fanontaniana ireo dia mety hitarika anao hahita fa ny fametrahana NVMe no valiny - fa tsy ny vidiny, fa noho izany. Indraindray ny marina dia amin'ny antsipiriany.
Momba an'i Jason Coari
Jason Coari, tale maneran-tany, Product Marketing Solution atsangana hitondra, dia veteran iray ao amin'ny indostrian'ny teknika informatika, izay manana traikefa nandritra ny taona 20 tao amin'ny fivarotana ambony sy ny varotra amin'ny fivarotana teknolojia. Jason mitarika ny tetik'adin'ny orinasa sy ny paikady ara-barotra amin'ny fametrahana fitobiana manerana ny indostria rehetra. Talohan'izay, niasa tamina karazam-pirazanana iraisam-pirenena izy tao amin'ny SGI, indrindra indrindra nitarika ny tetikasam-pandraharahana momba ny varotra HPC ary nitarika ny fikambanana ara-barotra Eoropeana sy APAC.
FANDROSOANA NY FOMBA FAMPISEHOANA SY NY FIVORIANA TANANA - Desambra 9, 2019
Mechanical Engineer - Desambra 9, 2019
Injeniera amin'ny laboratoara / saha - Desambra 9, 2019
fampitana injeniera fampitana Engineering Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows Video injeniera	2019-06-10
Previous: Ny Lucky Finn Productions dia mampiasa ny fitaovana Indipro amin'ny Documentaire Power
Next: ATSC 3.0: Ny tanjon'ny Revolisiona eo amin'ny famolavolana